အရွယ်မရောက်သေးသော ကချင်လူငယ်အား KIA မှလူသစ်အဖြစ် အတင်းအကြပ်ဖမ်းဆီး
ကချင်ပြည်နယ်၊ မန်စီမြို့နေဒေသခံကချင်လူငယ်တစ်ဦးအား စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကချင် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) အဖွဲ့မှ လူသစ်အဖြစ်အတင်းအကြပ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား ခဲ့ကြောင်း ယင်းဒေသခံများ ထံမှသတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ မန်စီမှ ပါတော်သို့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲနေသော ယင်းလူငယ်အား နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ယင်းလမ်းကြောင်း၌ သွားလာနေသော KIA အဖွဲ့က ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ကာ ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်ကယ်ရီသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
At 9/16/2014 03:23:00 PM No comments:
iPhone ကိုင်တဲ့သူတွေ ပြောလေ့လုပ်လေ့ရှိတဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အပြုအမူများ
ခုခေတ်မှာ Apple ကထုတ်ကုန်တွေဟာ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာကို မရှိပါဘူး။ ခုဆို ပိုဆိုးတာက iPhone မှ မဟုတ်ရင် အခြားဖုန်းအမျိုးအစားတွေ နဲ့ Apple ထုတ်ကုန်မှ မဟုတ်ရင် အခြား ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ဘယ်လိုမှ သုံးစားလို့မရတော့သလို သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀တွေမှာ iPhone နဲ့ Apple ဟာ ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှိကုန်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခု iPhone ကိုင်ထားသူတွေ တော်တော်များများပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတွေကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။
At 9/16/2014 03:19:00 PM No comments:
အကယ်ဒမီအတွက် နာမည်ထွက်ရင် ပိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်
၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ မှာ ဓာတ်ပုံတွေစရိုက်ပြီး၂၀၀၈ နှစ် ကုန်ခါနီးမှာ ဇာတ်ကားတွေ စရိုက်ဖြစ်ကာ အနုပညာသက်တမ်း ၆ နှစ်အတွင်းမှာ ၂၀၁၃အကယ်ဒမီတွက် ပရိသတ်တွေရော၊ အနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းကပါ ထင်ကြေးပေး နာမည်ထွက်နေသူကတော့ နင်စေရင်ကားမှာ ခပ်ဟော့ဟော့နဲ့ ပရိသတ်အကြိုက် သရုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ပါပဲ။ သူမရဲ့ အနုအရွ ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ခပ်ရမ်းရမ်း သရုပ်ဆောင်ဟန်တွေဟာဖြင့် ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်ကို အပြည့်အ၀
At 9/16/2014 03:18:00 PM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆန်ခရပူရီဒေသဟာ မွန်လူမျိုးစုတွေ အများဆုံး နေထိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းပြီ နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း သံဃာတော်များအား ဆွမ်း၊ ခဲဖွယ်တို့ကို အစဉ်လှူဒါန်းလျက် ရှိပါ တယ်။
At 9/16/2014 03:12:00 PM No comments:
MPT ဆင်းကတ်လက်ဆောင် ပေးသော်လည်း ဟန်းဆက် ဈေးနှုန်းအပေါ် ငွေကျပ် နှစ်သောင်းတင်ကာ ရောင်းချခြင်းများ ရှိနေ
မန္တလေးမြို့ရှိ ဖုန်း အရောင်းဆိုင်ကြီး တချို့တွင် ဟန်းဆက် တစ်လုံး ဝယ်ယူသူ တိုင်းအား ငွေကျပ် ၁၅ဝဝ တန် MPT ဆင်းကတ် တစ်ကတ် ပေးသည် ဆိုသော်လည်း ဟန်းဆက် ဈေးနှုန်းများကို ရှိရမည့် ဈေးထက် ပိုမို တင်ထားခြင်းများ ရှိနေသောကြောင့် အရောင်းဆိုင်ကြီး များနှင့် ဝယ်ယူသူများ ကြားတွင် အဆင်မပြေ မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
At 9/16/2014 03:07:00 PM No comments:
၂၀၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် KNU ဥက္ကဌ စောမူတူးစေးဖိုး ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် UNFC အစည်းအဝေးမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ အဲဒီ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ လူတွေက အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ခဲ့သည်။ KNU ဥက္ကဌ တဦးတည်းကို ဦးတည်သော ဝေဖန်ချက်များဖြစ်သည်။ KNU ဥက္ကဌ ကုို ဝေဖန်ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့မူများသည် အခုမှ မဟုတ်ပါ။
စောမူတူးစေးဖိုးသည် နွားကျောင်းသား(Cowboy)ဘ၀ကနေ KNU ဥက္ကဌကြီး အဆင့်ထိ ရောက်အောင် ဘဝကို ရုန်းကန်တက်လှမ်းလာခဲ့သူ တယောက်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှခေတ်တွင် ၇ တန်းအောင်သည်အထိ ပညာဆည်းဖူးခွင့်ရခဲ့သည်။
At 9/16/2014 03:01:00 PM 1 comment:
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ (မူကြမ်း)ကို ဆရာ၊ ဆရာမများ အဖွဲ့ချုပ်ကန့်ကွက်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ( မူကြမ်း) အပေါ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများက ကန့်ကွက်မှု အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ၄င်းတို့နဲ့တသားတည်း ရှိတယ် လို့ ထောက်ခံတဲ့ ကြေညာချက်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
At 9/16/2014 02:54:00 PM No comments:
အကျဉ်းသား၏ ဆန္ဒအတိုင်း ထောင်ဒဏ်တစ်သက်မှ သေဒဏ်သို့ ပြောင်းလဲပေးရန် ဘယ်လ်ဂျီယံတရားရုံးခွင့်ပြု
လူသတ်မှုနှင့် မုဒိမ်းမှုများကြောင့် ထောင်ဒဏ်တစ်သက် ချမှတ်ခံထားရသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးက မိမိကို သေဒဏ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့မှုကို ဘယ်လ်ဂျီယံ တရားရုံးတစ်ခုက လက်ခံခွင့်ပြု ပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အသက်(၅၀) အရွယ်ရှိ ဖရန့်ခ်ဗန်ဒန် ဘလီကန်က မိမိသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုရမ္မက် ထက်သန်မှုများ၏ သားကောင်အဖြစ်မှ ရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ (၁၉၈၀)ပြည့်လွန် နှစ်များက ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုအတွက် အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ချုပ်နှောင်ခံထားရသည့် ဗန်ဒန် ဘလီကန်သည် သေဆုံးခွင့် ရရှိရန်အတွက် (၃)နှစ်ကြာ တရားရင်ဆိုင်ပြီးမှ အောင်မြင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
At 9/16/2014 02:50:00 PM No comments:
IS နှိမ်နင်းရေးမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ရဲ့ နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းမှုရရှိ
ပြင်သစ် သမ္မတ Francois Hollande နဲ့ အီရတ်သမ္မတ Fuad Masum (Credit: Reuters) ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ​ကျင်းပခဲ့တဲ့ ​ညီလာခံအတွင်း ​ISIL ​အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို ​တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းဖို့ ​နိုင်ငံပေါင်း ​၃၀ ​က ​သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။
အနောက်တိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ​အာရပ်နိုင်ငံတွေက ​ပူးပေါင်းပြီး ​အီရတ်နိုင်ငံအတွင်းက ​ISIL ​တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ​ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ ​ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင် ​ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတည်ထောင်သူတွေကို ​ဘယ်လို ​နှိမ်နင်းသွားမလဲ ​ဆိုတဲ့ ​အစီအစဉ်အပေါ် ​နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေက ​သဘောတူညီမှု ​လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ​ပဲရစ်မြို့မှာ ​စုဝေးကြတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
At 9/16/2014 01:48:00 PM No comments:
PR စနစ်အား ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးကိစ္စမှာ ပြည်သူလူထု၏တောင်းဆိုမှုများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကစတင်သောကိစ္စဖြစ်ဟု ဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားတွင် ပါတီပြောကြား
အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် (PR) အား ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးကိစ္စမှာ ပြည်သူလူထု၏တောင်းဆိုမှု များကြောင့် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီအချို့မှသာ စတင်သောကိစ္စဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီက ဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အဆောက်အအုံသဘင်ဆောင်၌ ကျင်းပသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားသို့ NLD ပါတီမှတင်သွင်းသည့်
At 9/16/2014 01:42:00 PM No comments:
At 9/16/2014 01:26:00 PM No comments:
တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း မြန်မာကို ၀င်ရောက်နိုင်၊ မိုးသန်းထန်စွာ ရွာသွန်းမည်
မနေ့ညပိုင်းကစပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ဟိုင်နန်ကျွန်းကို စတင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ တိုင်ဖုန်း မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး ရေကြီးမြေမြပြိုမူတွေကို သတိမူ သင့်တယ်လို့ မိုးလေ၀သပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“အမေရိကန်မိုးလေ၀သက မှန်းထားတာတော့ ဒီမုန်တိုင်းက မြန် မာနိုင်ငံ မြောက် ဖျားလောက် ရောက် လာနိုင် တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် စောင့်ကြည့်ရ မှာပေါ့။ အနောက်ဘက် လာရင် တောင် တန်းတွေပေါတော့လေ။ အဓိကတော့ မိုးပါပဲ။ လေတော့ နည်းနည်းပါးပါးပါမယ်၊ တောင်ပေါ်ဒေသဆိုတော့
At 9/16/2014 01:22:00 PM No comments:
အပစ်အခတ်မရပ်သော KIA အဖွဲ့ ပယင်းမှော်ဒေသတွင် မှော်လုပ်သားများအား ထပ်မံဖမ်းဆီး
ကချင်ပြည်နယ်၊ တနိုင်းမြို့နယ်၊ ပယင်းမှော်ဒေသရှိ လဘူခရွှေမှော်တွင် မှော်လုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော လူငယ်များအား စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့၌ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA)အဖွဲ့မှ လူသစ်အဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း ယင်းမှော်သူမှော်သားများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါဒေသတွင် ပယင်းမှော်အပါအ၀င် ညောင်ပင်ကုန်းမှော်၊ ပိန်းနှဲကုန်းမှော်၊ ချမ်းသာကုန်းမှော်၊ နဂါးအိုင်မှော်၊ ဇီးဖြူကုန်းမှော်၊ လဘူခမှော်စသဖြင့် ပယင်းနှင့် ရွှေတူးဖော်လျက်ရှိရာ KIA အဖွဲ့၏ လူသစ်စု ဆောင်းရာ စားကျက်မြေသဘောမျိုးဖြစ်နေပေသည်။
At 9/16/2014 01:16:00 PM No comments:
ကားကြုံစီး မိန်းမလျာငါးဦး ဟံသာဝတီအဝိုင်း အနီးတွင် ငွေကျပ်ကိုးသိန်း ခိုးယူထွက်ပြေး
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ဟံသာဝတီ အဝိုင်းအနီးတွင် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် ည ၉ နာရီခွဲခန့်က ကယ်ဒီနာဗင် အမျိုးအစား ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ပေါ် လမ်းကြုံလိုက်လာသော မိန်းမလျာငါးဦးက ယာဉ်ခေါင်းခန်း၌ သိမ်းဆည်းထားသည့် ငွေကျပ် ကိုးသိန်းကို ခိုးယူထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း ကမာရွတ် မြို့မရဲစခန်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြား ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားမှာ ယင်းနေ့က ကယ်ဒီနာဗင်ဖြင့် ကမာရွတ်မြို့နယ်ဘက်သို့ မောင်းနှင်လာပြီး ဦးဝိစာရလမ်း၌
At 9/16/2014 01:12:00 PM No comments:
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ရှာမတွေ့ပါကအလှူငွေကျပ်သိန်း၁၃၀ကျော် ပြန်အပ်မည်
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ရှာဖွေ၊ ဆယ်ယူခြင်းအတွက် ပြည်တွင်း
အလှူရှင်များလှူဒါန်းထားသည့် ငွေကျပ် ၁၃၄သိန်းအား ရိုးမဘဏ်
တွင်အပ်နှံထားပြီးခေါင်းလောင်းကြီး ရှာဖွေမတွေ့ရှိပါက အလှူရှင်
များကို ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဟု ခေါင်းလောင်းရှာဖွေရေး ပြန်
ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
At 9/16/2014 01:09:00 PM No comments:
At 9/16/2014 01:06:00 PM No comments:
ကိုလံဘီယာ အမျိုးသမီးအသင်းဝတ်စုံကို နိုင်ငံတကာစက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ် ကန့်ကွက်
ကိုလံဘီယာအမျိုးသမီး စက်ဘီးအသင်းက ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ၀တ်စုံဟာ အ၀တ် မ၀တ်ထားတဲ့ ကိုယ်လုံးတီးပုံစံ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ နိုင်ငံတကာ စက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ်က ပြောပါတယ်။ အီတလီမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ပြိုင်ပွဲအတွက် ကိုလံဘီယာအမျိုးသမီး စက်ဘီးအဖွဲ့က ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အနီနဲ့ အ၀ါရောင် ရောထားတဲ့ ၀တ်စုံရဲ့ ခါးနဲ့ တင်ပါးနေရာမှာ အသားရောင် အထည်စကို အသုံးပြုထားတဲ့ အတွက် ကြည့်လိုက်ရင် ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးတီးပုံစံ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် စက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ်က ဥက္ကဋ္ဌ ဘိုင်ယံကွတ်ဆင်က အခုလို ဝေဖန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
At 9/16/2014 12:58:00 PM No comments:
ဓာတ်ကြိုးအန္တရာယ် ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှောင်ဟု လျှပ်စစ်ဌာနပြော
ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံမြို့နယ်၊ စောရန်ပိုင် (တောင်) ရပ်ကွက်၊ ကျောင်းလမ်းရှိ ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ရုံးချုပ်အနီး ဗို့အား (၆,၆၀ဝ) ဓာတ်ကြိုး သုံးကြိုးပြတ်ကျရာ ကောင်းကင် ဓာတ်အားလိုင်း ဌာနခွဲအဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများက ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - ဘိုဘို၊ မဇ္ဈိမ)
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရေး ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ်ရှောင်ကြရန် လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၀န်ကြီး ဌာန၊ လျှပ် စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်အောင်က သတိပေးလိုက် သည်။
၎င်းက “လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကုန်လုံးကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့လုပ်ထားတယ်။ လမ်းဖြတ်ကူးရင် ကား ကိုကြည့်ရှောင်ရသလို ဓာတ်ကြိုးအောက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဓာတ်ကြိုးကို ကြည့်ရှောင်ရမယ်။
အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို အရင်ကတည်းက သိထားရမှာပေါ့။ ဓာတ်ကြိုးတွေက အများကြီးမိုင်ပေါင်းများ စွာရှိနေတော့ ဘယ်အချိန် ပြတ်ကျမလဲဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး။ မြင်တဲ့သူက အကြောင်းကြားပေးမှသာလျှပ် စစ်ဝန်ကြီးဌာနက ချက်ချင်းပြင်လို့ရမှာ”ဟု ပြောသည်။
At 9/16/2014 12:13:00 PM No comments:
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းဆိုင်အချို့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူဖြင့် တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ် ကြိုတင်မှာကြားမှု စတင်လက်ခံ
မည်သည့်ဟန်းဆက် အမျိုးအစားမဆို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ ကျပ်အောက် လျော့နည်းမည်ဆိုသော တယ်လီနော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆင်းမ်ကတ်များကို မန္တလေးမြို့တော်ရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းဆိုင်အချို့တွင် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူဖြင့် ကြိုတင်မှာကြားမှုများကို စတင် လက်ခံလျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းဆိုင်များထံမှ သိရှိရသည်။
At 9/16/2014 12:11:00 PM No comments:
သည်စက်တင်ဘာ၁၃ရက်မွန်းလွဲ၁ နာရီခွဲက နေအိမ်၌ရှိစဉ် အိမ်နီးချင်းနေ ကျောင်းသူ
၀င်းအားပြောပြသည်မှာဝါးခယ်မမြို့ ဆေးရုံ ရပ်ကွက်နေ ဇော်ရှင်း (ခ) ဟာကင်း (၃၁)
နှစ်သည် ၎င်း၏သမီးငိုလွန်းသဖြင့် ခြုံစောင်ဖြင့်ကလေးမျက်နှာကိုဖိအုပ်လိုက်ရာ
သေဆုံးသွားသည်ဟု ပြောပြ၍ သိရသည်။
At 9/16/2014 12:09:00 PM No comments:
စက်တင်ဘာအစည်းအဝေး တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးရန် နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးဖြစ်နိုင်ဟု ဆို
လာမည့် ၂၂ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် UPWC နှင့် NCCT တို့၏ အစည်းအဝေးမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး အတွက် ပြု လုပ်သည့် နောက်ဆုံး အစည်းအဝေး ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာများနေကြောင်း နှစ်ဖက် စလုံးက ပြော ကြားသည်။
အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ (UPWC) နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို ကိုယ်စားပြုသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိ နှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) တို့၏ စက် တင်ဘာလ ၂၂ ရက်တွင် စတင်ပြုလုပ်မည့် NCA မူကြမ်းဆွေးနွေး ပွဲမှာ တရားဝင် (၆)ကြိမ်မြောက် ဖြစ်သည်။
At 9/16/2014 12:05:00 PM No comments:
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ အပါအဝင် ကမ္ဘာအနှံ့မှ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့တွင် တွေ့ဆုံကြကာ အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတော် IS ကို အပြီးတိုင် ချေမှုန်းနိုင်ရေးအတွက် တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းတစ်ရပ်က ဖော်ပြထားသည်။
At 9/16/2014 11:26:00 AM No comments:
ဘင်္ဂါလီ ၈ဝ ကျော် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် မြို့နယ်အဆင့် တင်ပြမှုသည် အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ဟုဆို
ဘင်္ဂါလီများကို နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ် မှတ်ချက်အား ဗဟိုကသာလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကျန်သည့်အဆင့်များကဖြစ်သင့်ကြောင်း တင်ပြမှုကိုသာ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်ဟု လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်းက ပြော သည်။
မြို့နယ်အဆင့်က နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူ စာရင်းဟုဆိုကာ ဘင်္ဂါလီ ၈ဝ ကျော်ကို လတ် တလောတွင် တင်ပြထားမှုအပေါ် ဝေဖန်နေ ခြင်းကို ၄င်းက ပထမဆုံးတုံ့ပြန်ပြော ကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
”ဥပဒေအရ ဗဟိုအဖွဲ့ကသာ ဆုံးဖြတ် နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
At 9/16/2014 11:23:00 AM No comments:
ဘူးသီးတောင်မှာ လှုံ့ဆော်မှုဆန်ဆန် ဖြစ်ရပ်တချို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်က စာသင်ကျောင်းတချို့မှာ အခုလအတွင်း လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာတချို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လုိ့ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းက အလယ်တန်းကျောင်းတချို့မှာ ဖြစ်စဉ်သုံးခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ခရိုင်ဒုတိယ ရဲမှူးကြီး ဦးရွှေသန်းက ပြောပါတယ်။ ပထမဖြစ်ရပ်မှာ ဘင်္ဂါလီကျောင်းသားတစ်ဦးက နိုင်ငံတော်သီချင်းစာသားထဲက မြန်မာဆိုတဲ့နေရာမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောင်းလဲသီဆိုခဲ့တာ၊ နောက် တစ်ခုက ကျောင်းရုံးခန်းအတွင်းဝင်ရောက်ပြီး နိုင်ငံတော်အလံအပါအ၀င် ပရိဘောဂတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာ၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ဆရာမရဲ့စားပွဲပေါ်မှာ စာရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒုရဲမှူးကြီး ဦးရွှေသန်း က ပြောပြပါတယ်။
At 9/16/2014 11:19:00 AM No comments:
လမ်းမကြီးဘေးက အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများကြောင့် ကားကြိတ်သေဆုံးမှုဖြစ်
At 9/16/2014 11:16:00 AM No comments:
မန္တလေး တက္ကသိုလ် ဧရိယာအတွင်း ၀ိုင်ဖိုင် အခမဲ့သုံးနိုင်သော်လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစွဲခွင့်ကို ပိတ်ထား
မန္တလေး တက္ကသိုလ် ဧရိယာ၂၅၃ ဒသမ ၃၃ ဧကအတွင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အီလက်ထရောနစ် စာကြည့်တိုက်ကို (e-library )ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အင်တာနက်ဝိုင်ဖိုင်စနစ်ကို အခမဲ့ထုတ်လွှင့် ထားသော်လည်း ဖေ့ဘွတ်သုံးစွဲခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားကြောင်း အဆိုပါ တက္ကသိုလ် မော်ကွန်းထိန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်တဲ့သူတွေအတွက် အခမဲ့တင်ဒါစနစ်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးတာ ဖြစ် ပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်ရင်တော့ စာကြည့်တိုက်မှာ လာရောက် လုပ်ဆောင်မှ ရမှာဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
At 9/16/2014 11:12:00 AM No comments:
အီဘိုလာထိန်းချုပ်ရေး ကုလသမဂ္ဂ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးခေါ်မည်
အီဘိုလာ ရောဂါ အကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်ဖို့ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူမယ်လို့ အမေရိကန် သံတမတ်ကြီး ဆမ်မန်သာ ပါဝါက ကြေညာပါတယ်။
အခုအထိ အီဘို လာ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၂ ထောင်ကျော်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
At 9/16/2014 11:05:00 AM No comments:
ခါကာဘိုရာဇီတောင်တက်သမားနှစ်ဦးအား ရှာဖွေရေးတွင် တရုတ်ကောင်းကင်ပြာ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တိဗက်တောင်တန်းဘက်မှ တက်ရောက်ရှာဖွေမည်
ခါကာ ဘိုရာဇီတောင်တက်သမား နှစ်ဦး အား ရှာဖွေရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ကောင်းကင်ပြာ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ တက် ရောက်မည်မဟုတ်ဘဲ တိဗက်တောင် တန်းဘက်မှသာတက်ရောက်ရှာဖွေ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်သံရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သို့သော် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းက မူ တရုတ်အဖွဲ့ အပြီးပြန်သည်ဟု ပြောကြားသည်။
At 9/16/2014 10:50:00 AM No comments:
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကို ဦးစံလင်းဦးဆောင်၍ မြန်မာ့နည်း၊မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် ဆယ်ယူနေသည်မှာ ယနေ့တွင် ၃၈ရက် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ခေါင်းလောင်းအား သြဂုတ်၉ရက် က စတင်ရှာဖွေခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၂၆ရက်တွင် နဂါးအပါအ၀င် အရိယာဝိဇ္ဇာအပေါင်း ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးနောက် ခေါင်းလောင်းတွေ့ပြီဟု ဦးစံလင်းက ကြေညာခဲ့သည်။ ခေါင်းလောင်း စတင်တူးဖော်စဉ်ကတည်းက ယုံကြည်သူများရှိခဲ့သလို မယုံကြည်သူများလည်း ရှိခဲ့ကြသည်။ ခေါင်းလောင်းရှိသည်ကိုပင် မယုံကြည်သူများကလည်း ရှိပြီး ခေတ်မီသိပ္ပံနည်းကျမဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဟုဆိုကာ နဂါးများအကြောင်း ပါဝင်လာသောအခါ လက်တွေ့သမားများအတွက် ရယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေါင်းလောင်းကြီးကို
At 9/16/2014 10:31:00 AM No comments:
မန္တလေးပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်တွင် အဓိက ပါဝင်သူများအဖြစ် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားသော ကိုရဲထွဋ်နှင့် မနုနုမြတ်တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သူများ အက်ဥပဒေ ၆ (၂) ၆ (၃) အရ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
မနုနုမြတ်ကို မှတ်ပုံနှစ်ခု ကိုင်ဆောင်မှုဖြင့် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပြီး ကိုရဲထွဋ်မှာလည်း မှတ်ပုံတင်နှစ်ခု ကိုင်ဆောင်သည်ကို သိရှိပါလျက် ပြောဆိုခြင်း မရှိသည့်အတွက် ၎င်းကိုပါ အလုပ်နှင့် ထောင် ၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
At 9/16/2014 10:10:00 AM No comments:
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့် မုတ်သုံလေ အားကောင်း ဒေသအများစု ရေဘေးအန္တရာယ်ရှိ
တောင်တရုတ်ပင်လယ် မှ ကယ်လ်မေဂီ (Kalmaegi) တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် ကုန်းတွင်းမုန် တိုင်းငယ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သလို၊ လက်ရှိ မုန် တိုင်းအရှိန်ကြောင့် မုတ်သုံလေ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ ဒေသ အများစု၌ ရေဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် သတိပြုသင့်ကြောင်း ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က ပြောသည်။
‘‘တတိယရေကြီးကာလ လည်း ဖြစ်နေတယ်။ မုန်တိုင်းက လည်း အားကောင်းနေတယ်။ သူ့ အရှိန်ကြောင့်လည်း မုတ်သုံက ပြန်အားကောင်းနေပြန်တယ်။ အခုတောင် မိုးခေါင်နေတဲ့ အ လယ်ပိုင်းမှာ ရေဘေးတွေ့နေရ ပြီ။ ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် ရေလွှမ်း မယ့်အန္တရာယ်ရော လေပြင်း ကျမယ့်
At 9/16/2014 10:03:00 AM No comments:
အီရတ်အမျိုးသမီးငယ် များကို ISIS အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွ များက ကျွဲ ၊ နွားများကဲ့သို့ လေလံတင် ရောင်းချလျက်ရှိ
ISIS Rapes, Tortures, Marries Captured Yazidi Women As Young As 13.
At 9/16/2014 09:59:00 AM No comments:
အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ် ဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးကိုပုဒ်မ ၄၃၆ပြင်ဆင် လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကြောင့်အ ရေးယူထားသည်ဆိုခြင်းမှာ လုံးဝ မဟုတ်မှန်ဘဲ မူလကတည်းက အုပ်ချုပ်မှု လျော့ရဲသည့်ဖြစ်စဉ် ကြောင့် တပ်တွင်းအရေးယူမှုကို ပြုလုပ် ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတပ် မတော်အရာရှိကြီးတစ်ဦးကပြော ကြားလိုက်သည်။
အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်တွင် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ဗိုလ်မှူး ကျော်စွာဝင်းမှာ မန္တလေးမြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါ တီနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံ
At 9/16/2014 09:56:00 AM No comments:
ပီအာရ်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြိုးပမ်းမှုမှာ မသင့်လျော်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့တွင် ဒီချုပ်စာတမ်းတင်သွင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သတင်းထောက်များကမေးမြန်းနေစဉ်(ဓာတ်ပုံ − ငြိမ်းချမ်းနိုင်/အီးပီအေ)
ဒီမိုကရေစီစနစ် ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် နေရသော ယခုကဲ့သို့ အချိန်အခါ တွင် နိုင်ငံအတွက် အခြားအရေး တကြီး လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည့် ကိစ္စများ ရှိနေသော်လည်း ရွေး ကောက်ပွဲစနစ် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေမှုများ မှာ သင့်လျော်မှုမရှိသော လုပ် ဆောင်ချက်များဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့တွင် တင်သွင်းသော စာတမ်းတွင် ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။
At 9/16/2014 09:52:00 AM No comments:
ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ဘင်္ဂါလီဦးရေ လေးသောင်းခန့် တိုးလာဟု ရခိုင်အမျိုးသားအင်အားစုပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခု ( ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ) )
ပဋိပက္ခ ၂ နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ဘင်္ဂါလီ လူဦးရေ လေးသောင်းခန့် တိုးပွားလာနေကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားအင်အားစုများက နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ တင်ပြစာတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
စစ်တွေမြို့ရှိ မြို့မိမြို့ဖ အဖွဲ့၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ရဟန်းတော်များ၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့က ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ နေရာ ချထားရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ၏ ဆန္ဒသဘောထားများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ ပေးပို့သော စာတွင် ယင်းကဲ့သို့ ဖော်ပြထား ခြင်းဖြစ်သည်။
At 9/16/2014 09:37:00 AM No comments:
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သည့် ဝေဒနာကိုမကြာခဏခံစားနေရ သူအရေအတွက်မှာ နည်းပါးသော်လည်း သိသာ ထင်ရှားသော အရေအတွက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်မိနစ်အနည်းငယ်မျှ တရားထိုင်ပေးခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီး မှုလျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုများကဖော်ပြ သည်။ တရား ထိုင်ခြင်းနှင့် ယောဂကျင့်သည့်နည်းအတိုင်း အသက်ရှူလေ့ကျင့် ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ခေါင်း တစ်ခြမ်း ကိုက်သည့် ဝေဒနာကိုသက်သာ စေနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှု အသစ်တစ်ရပ်က ဖော်ပြသည်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို အဓိကဖြစ်စေနိုင်သောအရာမှာ စိတ်ဖိစီးခြင်းဖြစ်ပြီး ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည့် တရားထိုင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး များကို ဒေါက်တာရေဗက္ကာအာဝင်ဝဲလ်စ်က ‘‘Headche’’ဂျာနယ်တွင် ယခုသီ တင်းပတ် အတွင်း ထောက်ပြရေး သားထားသည်။
At 9/16/2014 09:34:00 AM No comments:
မြ၀တီမြို့ ချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီးတွင် ချိန်ကိုက်မိုင်းတစ်လုံးတွေ့ရှိ
At 9/16/2014 09:26:00 AM No comments:
ရေငတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပင်ပန်းနွမ်းနွယ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိုရည် ပုလင်းတွေ၊ သံဘူးတွေ သောက်ပါက သင်၏ သွေးဖိအားကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါသည်. . . တစ်နေ့လျှင် သစ်သီးမှရသော
သကြားဓာတ် (Fructose) ၇၄ ဂရမ် စားသုံးပါက (အချိုရည် သံဘူး ၂ ဘူးခွဲနှင့်
ညီမျှသည် ) သွေးဖိအား ၃၆ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာစေနိုင်ကြောင်း သိရသည်. . .
အ၀လွန်နေခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ခြင်း ၊ သွားပိုးစားခြင်း ပြဿနားများ လည်း
ဖြစ်စေနိုင်သည်. . အချိုဓာတ်လျော့ထားသည်ဟု ဆိုသော ဖျော်ရည်ဘူး (Diet Soft
Drink) များသည်လည်း စိတ်မချရပါ. .. ဟားဗတ်ဆေးကျောင်းတွင် လေ့လာမှုအရ
At 9/16/2014 09:16:00 AM No comments:
တိုက်ရိုက်ဖိတ်က နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်ရေးရန် အသင့်ဟု အင်န်အယ်လ်ဒီဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်တွေဆုံပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် တော်ဝင်နှင်းဆီစားသောက် ခန်းမတွင် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်က ပြုလုပ်ကျင်းပစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - ဟိန်းထက်၊ မဇ္ဈိမ)
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အပစ်ရပ်ပြီးနောက် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အတိုက်အခံအင် အားစုများ တောင်းဆိုနေသည့် ကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းရေး ကျင်းပမည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲ ဖော်ဆောင်ရေးမူ ဘောင်ရေးဆွဲရန် တိုက်ရိုက်ဖိတ်ကြားလာပါက အဆင်သင့်ရှိပြီးဖြစ်သည်ဟု NLD မှ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးထွန်းထွန်းဟိန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
At 9/16/2014 09:04:00 AM No comments:
ချယ်ရီဦးကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းလာသော နာရီများအား Mobile Team နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့၏ လေဆိပ်၌စစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးမှုမပြီးပြတ်သေးချိန်တွင် အကောက်ခွန်မှ ပစ္စည်းထုတ်ယူခွင့်ပေးခဲ့မှု ဖြစ်ပွား
နိုင်မိသားစု ချယ်ရီဦးကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းလာသောနာရီများအား Mobile Team နှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ လေဆိပ်၌စစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးမှုမပြီးပြတ်သေးချိန်တွင် အကောက်ခွန်မှ ပစ္စည်းထုတ်ယူခွင့်ပေးခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုတားဆီးထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ မှ သိရသည်။ နိုင်မိသားစုချယ်ရီဦးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်အမှတ် IL23111 (၂၁.၈.၂၀၁၄) ၊ ID-525623 (၁.၉.၂၀၁၄)၊ Air Way Bil အမှတ် ၄၉၄၀၈၀၅၃ တို့ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃ တွင် တင်သွင်းလာသည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် Quartz အမျိုးအစား Romanson Brand Assorted Gents & Ladies Watch(with accessories) Stainless & Leather နာရီ ၉၃၇ လုံးအား Mobile Team ပူးပေါင်းနှင့် အကောက်ခွန်အဖွဲ့ထံသို့ ပြသစစ်ဆေးမှုခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ
At 9/16/2014 08:36:00 AM No comments:
သရုပ်ဆောင်လင်မယားနှစ်ဦး၏ နှိပ်စက်မှုခံရသည့် အိမ်အကူမိန်းကလေး ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သ ရုပ်ဆောင်လင်မယားနှစ်ဦး၏ နေအိမ်တွင် အိမ်အကူလုပ်စဉ် အိမ်ရှင်များ နှိပ်စက်မှု ကြောင့် ဒဏ်ရာရလာသည့် မြောင်းမြမြို့ နယ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး၏လက် ကို ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်နေ သည်ဟု ယင်း အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသူထံမှ သိရသည်။
''ခွဲစိတ်ခကတော့ ၁ဝ သိန်း လောက် ကုန်မယ်ဆိုတော့ ငွေမလောက်လို့ အလှူရှင်ရှာနေတယ်။ လက်ကဒဏ်ရာ ပြီး ရင် သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို ပြန်စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ရဦးမယ်'' ဟု ကလေးငယ်အား ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာအဖွဲ့ (ဃြဃ)ဌာန တာဝန်ခံ ဒေါ်မေလျံကပြောသည်။
At 9/16/2014 08:28:00 AM No comments:
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် ဖိုက်ဘာကွန်ရက်များ ဖြန့် ကြက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေ၍ ဖိုက်ဘာလိုင်းဖြင့် အင်တာနက်ပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သတင်းရရှိသည်။
‘‘ဖိုက်ဘာအင်တာနက်လိုင်းကို နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပြီး သုံးနိုင်ဖို့လေ့လာ မှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားတာပါ။ အဲဒါတွေပြီးတာနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ပြန်ပေးသွား ပါမယ်’’ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း Inernet Service Provider ဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးမျိုးဆွေကပြောသည်။
At 9/16/2014 08:24:00 AM No comments:
မန္တလေးပဋိပက္ခနှင့်ဆက်စပ်သော အမှုတွဲမှနှစ်ဦးအလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်၂ နှစ်စီချမှတ်
မန္တလေးပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် ကြောင့် လ၀ကအက်ဥပဒေပုဒ်မ ဖြင့် ထပ်မံတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရ သည့် ရဲထွဋ်နှင့်နုနုမြတ်တို့အား ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တရားရုံးက အ လုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်၂ နှစ်စီ အမိန့်ချမှတ် လိုက်ကြောင်း သ တင်းရရှိသည်။
ရဲထွဋ်နှင့် နုနုမြတ်တို့အား ၁၉၄၉မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှီတင်းနေ ထိုင်သူများမှတ်ပုံတင် အက်ဥပ ဒေ(လ၀က)ပုဒ်မ ၆(၂)(၃)ပုဒ်မ များဖြင့်အမိန့်ချလိုက်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၎င်းတို့၏ရှေ့နေဦးတင် ၀င်းအောင်ကပြောသည်။
At 9/16/2014 08:07:00 AM No comments:
အခုချပေးလိုက်တဲ့ဆင်းကဒ်(7)သိန်းအတွက်ဂျပန်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်မျက် လုံးပြူသွားရသော MPT ရဲ့မျက်လှည့်ပြကွက်
မြန်မာ - ဂျပန် သဘောတူညီမှုနဲ့ ဆင်းမ်ကတ် ၇ သိန်းကို ၈ ရက်အတွင်း ဈေးကွက်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဆင်းမ်ကတ် ၇ သိန်းလည်း ဈေးကွက်ထဲရောက်ရော Activate
( လက်တွေ့အသုံးပြုသူ ) ဖြစ်တဲ့ အရေအတွက်ကို စစ်လိုက်တဲ့အခါ ၃.၈ သိန်းပဲရှိတော့တယ်။
မြန်မာတွေ ပြလိုက်တဲ့ မျက်လှည့်ကြောင့် ဂျပန်တွေ အံ့သြပြီ သေတော့မလိုဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့တွေဖင်ပိတ်ပြီး အော်နေတာကတော့ဒီဇင်ဘာမတိုင်ခင်ဆင်းမ်ကတ်၅သန်းရောင်းမယ်
At 9/16/2014 08:03:00 AM No comments:
သန္တိသုခကျောင်းတိုက်အတွင်း သံဃာများ၊ တုတ်၊ ဓားများဖြင့် ရှိနေသည်ဟု သီတဂူဆရာတော်မမိန့်ကြားကြောင်း စီမံအုပ်ချုပ်ဆရာတော်များ မြွက်ကြား
သန္တိသုခကျောင်းတိုက် တွင် ဆရာတော်၊ သုံးဆယ်တို့ သည် တုတ်၊ ဓားတို့နှင့် ရှိနေ၍ အရေးယူရန် လိုအပ်နေကြောင်း သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးက မိန့် ကြားခဲ့ခြင်းမရှိဟု သီတဂူကျောင်းတိုက်ရှိ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ဆရာတော်များက မြွက်ကြားသည်။
သန္တိသုခ ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားရန် မဟနဆုံးဖြတ်ချက် ပါ အချက်သုံးချက်တွင် ပါဝင် သည့် သံဃာ့အစည်းအဝေးတွင်အထက်ပါ အကြောင်းအရာကို ဒကာတစ်ဦးနှင့် လာရောက်လျှောက်ထားကြောင်း
At 9/16/2014 07:57:00 AM No comments: